Wakiilka Neymar oo sheegay in Lionel Messi uu ku biirayo Paris Saint-Germain – Xidigaha
Neymar ayay u badan tahay inuusan ku laaban doonin Barcelona mustaqbalka dhow, waxaana jira fursado badan oo xiddiga reer Brazil markale uu ka garab ciyaaro Lionel Messi oo ku sugan Paris Saint-Germain , sida laga soo xigtay wakiilka weeraryahanka.
28 jirka ayaa si xoogan loola xiriirinayay inuu u dhaqaaqayo Camp Nou xagaagii hore, waxaana loo maleynayay in wiilka reer South America uu go’aansaday inuu xaqiijiyo ku laabashada kooxda reer Catalan marxaladaha qaarkood.
Si kastaba ha noqotee, sida laga soo xigtay Wagner Ribeiro , waxaa jira fursado badan oo Messi ugu dhaqaaqayo PSG saxiixa PSG marka loo fiiriyo Neymar inuu u dhaqaaqo kooxdiisii ​​hore.
”Waxaa jiray waqti uu ka murugooday dhaawiciisa. Waqtigaas wuxuu diyaar u ahaa inuu baxo, ku laabto Barcelona ama aado Real Madrid . Ma ahan maanta, waad arki kartaa farxadiisa,” Ribeiro ayaa u sheegay Placar .
Waan ku kaftamayaa isaga – isaga oo ku nool magaalada iftiinka, halkaasoo qof walba uu doonayo inuu ku dhadhamo, kuna raaxeysto cunnada Faransiiska, ku noolaato guri qurux badan, asxaab iyo qaraabo dhow, una ciyaaro mid ka mid ah naadiyada ugu fiican, wax walba oo qofku u baahan yahay iyo jecel yahay – waa maxay sababta uu uga tagayo PSG maanta?
“Neymar waxa uu ku faraxsan Kooxda, waxaana qabaa inuu joogi doono kooxda PSG ugu yaraan laba sano oo dheeraad ah Maanta, shaki la’aan ah, waxaa ka hawl yar Messi si uu uga tago kooxdiisa si Neymar uu ugu soo laabto Barcelona .
Qandaraaska uu haatan Neymar ku joogo caasimada Faransiiska ayaa dhici doona June 2022.
Be the first to comment on "Wakiilka Neymar oo sheegay in Lionel Messi uu ku biirayo Paris Saint-Germain"